Resaka tsy atao be - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Resaka tsy atao be
Hifety sy hihinan-kanina indray ny mpanao politika rahampitso, eny Iavoloha mandritra ny hetsika fiarahabana ny Filohan’ny tetezamita mivady. Hiedinedina hiseho televiziona indray ny ankamaroan’ireo nahazo fanasana manokana. Na izany aza hita ho be filaza sy manao fikafika ireo tandapan’ny tetezamita, izay nilaza fa «tsy hisy kabary politika mandritra io lanonana io». «Tomban’ezaky ny zava-bita sy ny vinavina amin’ny ho avy, hono, no hatao». Fa tsy kabary politika ve izany e? Sa kabary ambony latabatra sy resaka ambony vavahady no azo ilazana azy? Tsy misy iraharahan’ny vavalalabemandry izany rehetra izany anefa akory fa ny tena andrasan’izy ireo izao dia izay hampitombo ny vola miditra any am-paosiny, hahafahany miatrika ny fiainana sy ny fanatsarana ny fandriampahalemana. Raha tsy mbola azo antoka tokoa aloha ny hahatanterahan’ireo, tsy tokony ho be kabary koa ny mpitondra e!
Bao tsy mivily, Mpanoratra Rijakely, 08.01.2013, 14:06	FIARAHAMONINA